- Page 185 of 188 - NEWS & MEDIA
စိတ်ထား မပြည့်ဝတဲ့သူ (EQ နိမ့်တဲ့သူ) တွေရဲ့လက္ခဏာရပ်များ
လူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ EQ ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ပညာရှင်တွေဆိုရင် IQ ထက် EQ ပိုကောင်းမှ ဘဝမှာ အပြည့်အဝအောင်မြင်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမား၊ မိဘနဲ့သားသမီး၊ ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်း တွေကြားမှာ EQ ကောင်းခြင်းဟာ အဓိကနေရာမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ မိသားစုမှာ EQ မကောင်းတဲ့သူတွေကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေ၊ အငြင်းပွားမှုတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ EQ မကောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲ။ မသိလို့လုပ်မိတာက ပြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေက EQ နိမ့်တဲ့အပြုအမူ၊ စိတ်ထားမပြည့်ဝတဲ့ အပြုအမူလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ အငြင်းပွားမှုတွေကို အများကြီးလုပ်တတ်သူ တခြားသူတွေနဲ့မကြာခဏ အငြင်းပွားနေတတ်သူကို တွေ့ဖူးပါသလား။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့သာမက …
ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ
ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ … သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ အောက်ကျပေးရတာကို မရှက်ပါနဲ့ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ့်မာနကြောင့် လက်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာကို ရှက်ပါ အထီးကျန်ရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်းမတူ စရိုက်ချင်း မဆီလျော်တဲ့ သူနဲ့ တဘဝလုံး ဝဋ်ခံရမှာကို ကြောက်ပါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ ဆုံးရှုံးရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်သော သူတွေနဲ့တမိုးတည်း နေရမှာကို ကြောက်ပါ ပကာသနဆိုတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတွေကို မမက်မောပါနဲ့ရိုးရှင်းသော ဘဝနဲ့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကို မက်မောပါ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာသေးတာကို စိတ်မပျက်ပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမှာ …
အောင်ပန်း ဈေးနေ့ ရောက်ရင် ဝယ်စားကြည်ပါ အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ ပအို့ဝ်လူမျိုးအခေါ်အဝေါ်က *ဟမ်းတော့*လို့ခေါ်တယ် မြေကြီးတော့ဟုတ်တယ် ရိုးရိုးမြေကြီးတော့ မဟုတ်ပါဖူး လွယ်လွယ်နဲ့ရှာလို့မရပါဘူး ဒီစားလို့ရတဲ့မြေကြီးတွေက နေရာသက်သက်ရှိပါတယ် များသောအားဖြင့်အဖိုးအဖွားတွေကြိုက်ကြတယ် အစာပြေပေါ့ ထမင်းစားပြီးရင်စားကြတာများတယ် တချို့ကြ စားတာစွဲသွားရင် မစားဘဲမနေနိုင်ဖြစ်သွားပါတယ် နို့ဆီဘူးတဘူးငါးရာပါ အရသာက စိမ့်ပါတယ် ထုံးဓါတ်အနဲငယ်ပါပါတယ် အနဲငယ်စပ်ပါတယ် ရှမ်းလို လိန်ဟွမ်းလို့ခေါ်တယ် ဗမာလို မြေကြီးမွှေးလို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆို ပအို့ဝ်လူမျိုးတွေ အစားများတယ် Credit:ဘကြီးစိုး Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အောငျပနျး ဈေးနေ့ ရောကျရငျ ဝယျစားကွညျပါ အောငျပနျးဈေးနတေို့ငျး မွကွေီးခဲလာရောငျးတဲ့ မို့အို စားလို့ရတဲ့မွခေဲလေးတှပေါ မွခေဲတိုငျးစားလို့မရပါဘူး။ ပအို့ဝျလူမြိုးအချေါအဝျေါက *ဟမျးတော့*လို့ချေါတယျ မွကွေီးတော့ဟုတျတယျ …
ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့ပါဘူး။ ခြေသဲ လေးကလည်း နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး လှပလာပါလိမ့်မယ်။ ဆေးက အဝေးကြီး ရှာစရာမလိုတဲ့တွက် အားလုံးအလွယ်တကူ ပျောက်ကင်းသက်သာနိုင်ပါတယ်။ အိမ်သုံးဆား။ ။ ဟင်းအိုးထဲ ခတ်တဲ့ဆားပါ။ ဆားအနည်းငယ်ကို ခြေစွယ်ငုတ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပုံထားပေးပါ။ ရေအနည်းငယ်ကို လက်ညိုးနဲ့ဆွတ်၍ တစ်စက်တည်း သာ ချပါ။ ဆားပုံထားတဲ့ပေါ်မှာ ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားအရေပျော်ပြီး ဘေးကို စီးကျသွားရင် နဲနဲထပ်ပုံပါ။ …
အသားအရေကို အမြဲနုပျိုစေမယ့် သဘာဝပစ္စည်းများ
အသားအရေကို အမြဲနုပျိုစေမယ့် သဘာဝပစ္စည်းများ သင့်အသားအရေကို photoshop နဲ့ ပြင်တာထက် ပိုပြီး နုပျိုလှပအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်အသားအရေကို သဘာဝ အသီးအနှံတွေသုံးပြီး အမြဲနုပျိုအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ် …. ခရမ်းချဉ်သီး ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို ခရမ်းချဉ်စီးနဲ့ ပြုပြင်လို့ ရပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလေးဖြစ်အောင် အကွင်းလိုက်လေး လှီးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ် 20 ကြာကပ်ပေးထားရမှာပါ ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ လုပ်မယ်ဆိုရက် အသားအရေက ရေဓာတ်ပြည့်လာပြီး ပြန်လည် နုပျိုလာမှာပါ…. မျက်နှာယောင်နေတယ်ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို အရည်ညှစ်ပြီး မျက်နှာပေါ် ပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အသားအရေ ညီညာဖို့ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်နဲ့ သံလွင်ဆီကို …
ဟော့ပေါ့ စားရင် ထည့်စားတတ်တဲ့ အပ်မှိုလေးကနေရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ
ဟော့ပေါ့ စားရင် ထည့်စားတတ်တဲ့ အပ်မှိုလေးကနေရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ Hot Pot လေး စားလိုက်ရရင် သိပ်အရသာရှိ မှာပဲနော်။ Hot Pot စားတဲ့အခါ အသား၊ အသီးအရွက်၊မှို၊ ကြက်ဥကစလို့ နှစ်သက်ရာတွေကို ထည့်စားကြတယ် မဟုတ်လား…. ဒီလိုထည့်စားတဲ့ အရာတွေထဲမှာ တေ်ာတော်လေး ခံတွင်းတွေ့စေတဲ့ မှိုတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပ်မှိုက အရသာတင် ကောင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်…..အပ်မှိုစားရင်ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေက….. ၁။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတယ် အပ်မှိုမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေသလို ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် အာနိသင်တွေလည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အရိုးတွေကို သန်မာစေတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်လည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်….. အပ်မှိုမှာပါဝင်တဲ့ …
အရမ်းတော့ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တုန်းကမှ ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ လူတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ဘက်ကချို့ယွင်းချက်ရယ်လို့မရှိပေမယ့် ဘာကြောင့်အချစ်ရေးကံမကောင်းရတာလဲဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်နိုင်သလို၊ ဒီအတွက် အဖြေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒီအချက်အတွက် အဖြေရှိလာပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ အရမ်းချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ရေးကံမကောင်းခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ် တိုက်ကြည့်လိုက်နော်။ (၁) ပုံပြင်တွေကိုယုံနေတယ် သင့်အနေနဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်တွေကို ယုံကြည်နေပြီး ပုံပြင်ထဲကလို သင့်ကို လုံးဝနားလည်ပြီး အချစ်ကြီးချစ်နိုင်မယ့်သူမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေတတ်တယ်။ ပုံပြင်တွေထဲကလို အခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကျော်လွှားပြီး ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်မျိုးကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးယဉ်လွန်းနေတော့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ တွေးထားသလိုမဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးလို့ ထင်လာပါတော့တယ်။ (၂) ဂရုစိုက်တတ်လွန်းတယ် ကိုယ့်ချစ်သူကို …
“ဟင်းချိုမှုန့်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် ကြက်သားမှုန့်ကလည်း စိတ်မချရဘူး.. ကန်စွန်းဥနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဟင်းခတ်မှုန့်လုပ် နိုင်ပြီ”
“ဟင်းချိုမှုန့်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် ကြက်သားမှုန့်ကလည်း စိတ်မချရဘူး.. ကန်စွန်းဥနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဟင်းခတ်မှုန့်လုပ် နိုင်ပြီ” အချိုမှုန့် အန္တရာယ်…. နေ့စဉ် စားသုံးနေသော အစားအစာများတွင် အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှု၏ ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မြဝတီ စာဖတ်ပရိသတ်များ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိစေရန်အတွက် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင် (Fame) နှင့် မြဝတီအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများကို ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်…. မေး။ ။ ဆရာခင်ဗျာ။ အချိုမှုန့် အကြောင်းကို မေးမြန်း ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ်၊ပထမဆုံး အနေနဲ့ အချိုမှုန့် ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး ပစ္စည်းလဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံး ပြောပြပေးစေ ချင်ပါတယ်… ဖြေ။ …
ကဆုန်လပြည့် ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော်
ကဆုန်လပြည့် ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော် ⬛️ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ⬛️ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း “ကဆုန်လပြည့်နေ့”၌ ကျင်းပပူဇော်လေ့ရှိကြသည်ထိုသို့ ကျင်းပပူဇော်ရခြင်းမှာ….မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ကဆုန်လပြည့်၊ “သောကြာနေ့”၌ ဖွားမြင်တော်မူ၍ ၊ ကဆုန်လပြည့်၊ “ဗုဒ္ဓဟူးနေ့”၌ ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်တော်မူပြီး၊ကဆုန်လပြည့်၊ “အင်္ဂါနေ့” ၌ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခဲ့သည်…. ထို့ကြောင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အလေးအမြတ်ထားအပ်သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ထို့ပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် မဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်၌ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့…… နေမဝင်မီ မာရ်နတ်မင်းနှင့် စစ်သည်အပေါင်းကို သစ္စာပါရမီအဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် အောင်တော်မူ၍ မိုးသောက်ယံ၌ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့သည်..ထို့ကြောင့် ဗောဓိညောင်ပင်သည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အလေးအမြတ် ပူဇော်ရာ ဋ္ဌာနတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေသည်….. …
ဆရာဝန်တောင် မယုံနိုင်တဲ့ သွေးကြောများအတွင်း ပိတ်ဆို့နေသောအဆီများကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို ကျော်မသွားနဲ့ ဖတ်ပါ…မိမိ friends များအတွက်ရှယ်ပေးပါ.. အရင်အပတ်က နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်….. ဒီအပတ်မှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတ်ဆို့နေတာကို အလွယ်တကူရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းတစ်ခုကို ပေးပါမယ်၊America မှာ ချမ်းသာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်…. ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုန်းသတ္တဝါအသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတန်းစားလေ့ရှိသူပေါ့၊ လှုပ်ရှားမှုကလည်း သိပ်မရှိဘဲ ဇိမ်ခံတာသာများတယ်… အသက်နဲနဲရလာတော့ ရင်ဘတ်ကအောင့်အောင့်လာတယ်၊ဒါနဲ့သူလည်း ဆရာဝန်ကိုသွားပြရတာပေါ့၊ ဆရာဝန်ကစစ်ကြည့်လိုက်တော့ နှလုံးသွေးကြောတွေ ၃ချောင်းလုံး 90% ပိတ်နေပြီ ခွဲစိတ်ကုသမှရမယ်ဆိုပြီး သူကိုရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်…. သူလည်း စိတ်တော်တော်ညစ်သွားပြီး တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတွေဆီကို သွားပါတယ်၊တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးက သူ့ကိုနေ့စဉ်ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားခိုင်းပါတယ်…. ဘာဟင်းချက်ချက် ကြွက်နားရွက်မှိုသုံးလေးခုလောက် ထည့်ချက်ပြီး …
Previous 1 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 Next
This Month : 41531
This Year : 363664
Total Users : 658797
Total views : 3321916